ပွောငျး မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယူရို
ကုလသမဂ္ဂလဲလှယ်မှုနှုန်း data တွေကိုမှာ 06/07/2022 13:16
မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယူရို ပွောငျး ။ ငွေကြေးလဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် ယူရို အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ စျေးနှုန်းယနေ့။
10 000 မြန်မာကျပ်ငွေ = 5.26 ယူရို
ယူရို မှ မြန်မာကျပ်ငွေ ပျမ်းမျှလက်ရှိနှုန်းပြောင်းလဲပါ။ ယူရို သို့ မြန်မာကျပ်ငွေ ၏ပြောင်းလဲခြင်း၏ပျမ်းမျှတန်ဖိုးအားပြသသည်။ ငွေလဲနှုန်းအပေါ်ပြန်ကြားရေးရည်ညွှန်းသည်။ မြန်မာကျပ်ငွေ ငွေလဲနှုန်း ယူရို သို့တက်လေ၏။ 1 မြန်မာကျပ်ငွေ ၏ကုန်ကျစရိတ်ယခု 0.000526 ယူရို ညီမျှသည်။ အဆိုပါ မြန်မာကျပ်ငွေ နှုန်းမှာရာခိုင်နှုန်း point ရဲ့0ရာစေ့သောအားဖြင့် ယူရို ဆန့်ကျင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယူရို
ခြောက်လအကြာ, မြန်မာကျပ်ငွေ 0.000505 ယူရို အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်က, မြန်မာကျပ်ငွေ 0.000651 ယူရို အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း မြန်မာကျပ်ငွေ 0.0005140င် ယူရို အဘို့ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ယူရို ရန် မြန်မာကျပ်ငွေ များ၏ငွေလဲနှုန်းဇယားပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ 0.9% - တစ်ပတ်ကို ယူရို မှ မြန်မာကျပ်ငွေ များ၏ငွေလဲနှုန်းအတွက်ပြောင်းလဲမှု။ တစ်နှစ် ယူရို မှ မြန်မာကျပ်ငွေ များ၏ငွေလဲနှုန်းများ၏ပြောင်းလဲမှုကို 2.45% ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေလဲလှယ်နှုန်း မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) သို့ ယူရို (EUR) Forex လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ်အသကျရှငျ
ငွေကြေး ပွောငျး မြန်မာကျပ်ငွေ ယူရို
မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) သို့ ယူရို (EUR)
10 000 မြန်မာကျပ်ငွေ 5.26 ယူရို
50 000 မြန်မာကျပ်ငွေ 26.32 ယူရို
100 000 မြန်မာကျပ်ငွေ 52.64 ယူရို
250 000 မြန်မာကျပ်ငွေ 131.60 ယူရို
500 000 မြန်မာကျပ်ငွေ 263.21 ယူရို
1 000 000 မြန်မာကျပ်ငွေ 526.42 ယူရို
2 500 000 မြန်မာကျပ်ငွေ 1 316.04 ယူရို
5 000 000 မြန်မာကျပ်ငွေ2632.08 ယူရို
သငျသညျ 10 မြန်မာကျပ်ငွေ ဘို့ 0.005264 ယူရို ရောင်းချနိုင်ပါတယ် ။ 25 မြန်မာကျပ်ငွေ 0.01316 ယူရို ။ သငျသညျ 0.026321 ယူရို ရှိပါက, ထို့နောက် သြစတြီးယား သူတို့ 50 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ ယနေ့ 0.052642 ယူရို 100 မြန်မာကျပ်ငွေ ။ သငျသညျ 250 မြန်မာကျပ်ငွေ ရှိပါက, ထို့နောက် သြစတြီးယား ၌သင်တို့ကို 0.13 ယူရို ။ သငျသညျ 500 မြန်မာကျပ်ငွေ ဘို့ 0.26 ယူရို ရောင်းချနိုင်ပါတယ် ။
မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယူရို ငွေလဲလှယ်နှုန်း
မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယူရို ယနေ့အချိန်တွင် 06 ဇူလိုင်လ 2022
06.07.2022 0.000539 1.3 * 10-6 ↑
05.07.2022 0.000537 2.07 * 10-5 ↑
04.07.2022 0.000517 -2.78 * 10-5 ↓
03.07.2022 0.000544 -1.71 * 10-5 ↓
02.07.2022 0.000562 1.91 * 10-5 ↑
မြန်မာကျပ်ငွေ ယူရို မှ6ဇူလိုင်လ 2022 - on 0.000539 ယူရို ။5ဇူလိုင်လ 2022 အပေါ် ယူရို မှ မြန်မာကျပ်ငွေ 0.000537 ယူရို ။4ဇူလိုင်လ 2022 အပေါ် ယူရို မှ မြန်မာကျပ်ငွေ 0.000517 ယူရို ။ ထဲမှာအများဆုံး MMK / EUR ငွေလဲနှုန်း 02.07.2022 ။ ထဲမှာနိမ့်ဆုံး မြန်မာကျပ်ငွေ မှ ယူရို ငွေလဲနှုန်း 04.07.2022 ။
မြန်မာကျပ်ငွေ သို့ ယူရို ငွေလဲနှုန်းသမိုင်း
မြန်မာကျပ်ငွေ နှင့် ယူရို ငွေကြေးသင်္ကေတများနှင့်နိုင်ငံများ
ယူရို ငွေကြေးသင်္ကေတ, ယူရို ပိုက်ဆံနိမိတ်လက္ခဏာ: €. ယူရို ပြည်နယ်: သြစတြီးယား, Akrotiri နှင့် Dhekelia, အင်ဒိုရာ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗာတီကန်, ဂျာမနီ, ဂရိ, အိုင်ယာလန်, စပိန်, အီတလီ, ဆိုက်ပရပ်စ်, ကိုဆိုဗို, လူဇင်ဘတ်, မော်လ်တာ, မိုနာကို, နယ်သာလန်, ပေါ်တူဂီ, ဆန်မာရီနို, ဆလိုဗေးနီး, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, မွန်တီနီဂရိုး, စတိုးနီးယား. ယူရို ငွေကြေးကုဒ် EUR. ယူရို အကြွေစေ့: eurocent.